Ndi okenye ụgbọ ala, nke ka elu oriri mmanụ ụgbọ ala? -News Center-NINGBO SUNSOUL AUTO ACCESSORIES CO., LTD
Thegbọ ala ahụ ọ na - eme okenye, mmanụ ụgbọ elu ya dị elu?
Oge: 2020-08-17 Hits: 63
Ọtụtụ ndị ga-ezute ụdị nsogbu ahụ. Ka ha na-anya ụgbọala, otú ahụ ka ha maara nke ọma. Kaosinadị, ka afọ ụgbọ ala ahụ na-abawanye, mmanụ ụgbọala nke ụgbọ ala na-arịwanye elu. N'ezie, nke a abụghị nsogbu nke ụgbọ ala. Ọ bụ n'ihi na ọ dị mkpa ka edozi ma ọ bụ dochie ụfọdụ akụkụ ụgbọ ala gị. Enweghị njikọ a na-apụghị izere ezere n'etiti ndụ ọrụ nke ụgbọ ala na oriri mmanụ.
Increaseba ụba nke oriri mmanụ zuru oke metụtara ihe isii:
1. Lelee nrụgide taya na taya na-eyi ugboro ugboro
Ọ bụrụ na nrụgide taya dị oke ala, esemokwu dị n'etiti taya na ala ga-abawanye, nkwụsi ike ga-abawanye, na oriri mmanụ ga-abawanye. Mgbe ị na-anya ụgbọ ala, ọ bụrụ na o doro anya na ogologo ụgbọ ala nke ụgbọ ala belatara, ị kwesịrị ịlele ma nrụgide ikuku taya ahụ na-agbaso ọkọlọtọ ikuku. Nkịtị taya nrụgide dị gburugburu 2.5bar, ọ nwere ike belata 0.1bar n'oge ọkọchị. Chetakwa ịlele ogo nke taya. Ọ bụrụ na taya ndị ahụ akpọnwụọ nke ukwuu, ha ga-amị amị, mmanụ ọkụ ga-abawanye. Ohaneze, kwa kilomita iri ise, ị ga-agbanwerịrị taya ọhụrụ.
2. Lezienụ anya na mmanụ, hichaa nkwụnye ego carbon
Ọtụtụ ndị nwe ụgbọ ala anaghị etinye uche na ngwaahịa mmanụ. Mmanụ ụgbọala na-adịghị mma ga-eme ka nkwụnye ego carbon dịkwuo elu. Nnukwu ihe nkwụkọ carbon ga-eme ka mgbidi ọkpọkọ ahụ sie ike, na-emetụta mmetụta oriri na ogo nke gas agwakọtara, na oriri mmanụ ga-arị elu nke ukwuu. Ya mere, enweghị ike ileghara ogo mmanụ ụgbọala anya, ọ dịkwa mkpa iji dozie ego carbon kwa ọnwa isii.
Previous: Gịnị kpatara ọnụ ahịa mmezi ụgbọ ala ji dị oke elu?
Ọzọ: Ezigbo mmezi, ụgbọ ala ahụ ga-adị ogologo ndụ